BARBAARIN EY 4 BILOOD JIR AH (17 TODDOBAAD) SPENCER THE PIT BULL - EEYAHA
Barbaarin Ey 4 bilood jir ah (17 toddobaad) Spencer the Pit Bull
Maalin nolosha kula jirta Spencer Wiishka Mareykanka ee Godka Bull Terrier. Toddobaadkii siddeedaad ee Spencer - 17 toddobaad, 38 rodol, 17 3/4 inji oo dhulka ah illaa barta ugu sarraysa garbaha (qallalaya).
4 bilood jir.
Spence wuxuu ku sii wadaa inuu sifiican ugu sameeyo burburka guriga. Weli wuu kacaa 7:00 subaxnimo, badanaa badanaa, subax kasta. Markay furto santuuqa sanduuqa wuxuu toos u aadaa albaabka hore, dibedda ayuu aadaa oo meheraddiisa qabsadaa. Inta lagu jiro maalinta waxaan si wanaagsan ula dhaqannaa jimicsiga oo aan u oggolaanno banaanka inta badan inuu musqusha aado. Spence wuxuu ku socdaa albaabka hore dhowr jeer maalintii waanan fureynaa oo waannu iska deynnay. Waxaan sidoo kale la soo baxnaa isla marka uu hurdada ka tooso, isla marka uu cuno ka dib iyo haddii ay muddo uun ahayd markii ugu dambeysay ee uu maqnaa. Isla marka aan arko isaga oo bilaabaya in uu ursado dabaqa, wuu baxayaa.
Daawada dixiriga ah
Saddex usbuuc ayaa ka soo wareegtay tan iyo markii Spencer uu qaatay qiyaastiisii ​​ugu horreysay ee daawada gooryaanka ah. Hadda waxay ahayd waqtigii uu qaadan lahaa labaad. Ardaygu wuxuu cunay inta badan kiniinka la calaliyo keligiis, laakiin umuu muuqan inuu doonayo xoogaa yar oo ugu dambeeyay. Qeybtii ugu dambeysay waxaan galiyay jeebka kiniiniga eyga wuuna cunay isla markiiba.
Waxaan ku qaadaneynaa Spencer safar magaalada Philadelphia. Ka hadal qaar ka mid ah is dhexgalka wanaagsan: jack dubbe, dadka, baabuurta, geesaha, seeriga, qeylada iyo dhaqdhaqaaqa jihada kasta.
Waxaan ku hakaneynaa goob cunto iibiyaha ah si aan u qado. Spence, waxaan rajeynayaa inaadan cunin wax ay tahay inaadan ku hoos cunaynin.
madow iyo caddaan Diiqa xarragoonaya Talyaaniga
Qadada ka dib waxaan go'aansanay inaan qaadno Spencer iyo Bruno oo ku socda faras qaadis faras. Labadooda midkoodna fardaha ama gaadhigu cuni maayo. Spencer wuxuu ku fadhiyaa kursiga si uu wax u arko Bruno-na wuxuu fadhiyaa sagxadda.
Kartida hubinta dhamaan ficilka aan ku dhaafno wadada.
In badan iyo in ka badanba waxaan maqalnaa dadka oo leh, 'Aw, fiiri, waxaa ku jira eey yar oo saaran gaariga!'
Spencer oo ku raaxeysanaya raacitaanka
Isagu waa nin caan ah oo jecel oo aad ugu xidhan aadanaha, kuwa uu yaqaan iyo kuwa aanu aqoonba. Wuxuu jecel yahay qof walba.
Waxaan u maleynayaa inay isaga jecel yihiin! Bidix ilaa midig: Bocorka, Spencer iyo Blizzard.
Waxaa jiray duqsiyo dhowr ah oo ku hareeraysnaa guriga kuwaas oo ku dhacayay eeyaha oo qaniina. Waxay ku degeen Bruno Feeryahankii intuu isku dayey inuu seexdo wuuna soo jeesan lahaa oo wuu isku dayey inuu cuno. Aad u gaabiya markasta, dabcan. Waxaan ka helay duulimaadkii si aan uga caawiyo isaga oo si qalad ah u baqay waxa aad ogtahay-waxa ka baxsan Spencer markii aan isku dayay inaan helo duqsi ku soo degay meel aan sidaa uga sii fogayn. Spencer wuxuu si lama filaan ah uga baqay duufaanta. Maxaa la sameeyaa, maxaa la sameeyaa. Ma doonayo in ardaygu ka baqo wax aan sinaba u noolaan karin. Waxaan go’aansanay inaan u bedelno ciyaar. Adigoon lahadlin Sara waxay bilawday adeegsiga duqsiga si ay ugu ag wareegto kubbadiisa. Spencer ma uusan hubin markii hore laakiin kubada ayaa aheyd mid aad u jilicsan. Wuxuu ilaaway wax walba oo ku saabsan swatter inuu yahay wax cabsi leh wuxuuna bilaabay inuu ku xiriiriyo ciyaarta kubada.
weli Bernard eey buurta bernese
Waxaan la raacnay eeyo safar aan ku tagnay Hershey Park. Eeyo looma oggola inay galaan baarkinka, laakiin waxaa awooday in lagu maro agagaarka baarkinka. Xadiiqadu waxay bixisaa aqal hawleed qaboojiye leh oo aad eeyahaaga ku haysan karto maalinta, si kastaba ha ahaatee waxaan haysannay RV-keena mana aanan u baahnayn inaan adeegsiga adeegno. Waxaan ku soo noqday RV-ga oo waxaan ku lugeeyey dhowr jeer maalintii oo dhan.
Spencer iyo Bruno waxay maqlaan dadka ku qaylinaya koritaanka. Kaalay wiilasha, leexo oo fiiri kamaradda.
Taasi waa ka fiican tahay. Dhoolo cadee Waxaan ku soo raacay eeyaha banaanka hore ee baarkinka midigta ku xigta kabadhka shaashadda. Bruno ayaa halkaas joogay, taas wuu sameeyay wuuna iska sii watay socodkiisii ​​markii qayladii qaylisay ay soo dhawaatay. Spencer ma uusan hubin markii hore, wuxuu ku eegay indho fiiqan, laakiin si dhakhso leh ayuu ula qabsaday dhawaqa sidoo kale.
Socod dheer oo subaxdii ah ka hor intaanan u dhaqaaqin baarkinka, anaga oo socod ku hakaneyna wadada loo maro jardiinada iyo dhowr lugood oo dhaadheer oo baarkinka ah ayaa eeyaha aad u ilaalinayay sidan oo kale intii aan banaanka ka joognay RV. Spencer aad ayuu u weyn yahay hada inuu xiro albaabka qafiskii aan keenay oo wax kasta oo ka weyni kuma haboona albaabada RV. Spencer wali wuu jeclaa in uu ku seexdo iyada oo madaxa laadlaadayo markaa si kasta oo aan ula nimid.
Dhamaadka habeenka waxaan fadhiistay jaranjarada eyda banaanka hore ee laga galo, waxaan sugayaa caruurta markay dadku ka soo baxaan beerta. Kooxo badan oo kala duwan oo dad ah ayaa u yimid xayawaanka Bruno iyo Spencer. Eeyaha ayaa cunay dareenka. Labaduba waxay jecel yihiin carruurta yaryar. Isla marka dadka Bruno uusan garanayn bilawga isaga carabkiisa wuxuu bilaabayaa inuu caadaysto caado aan jeclaan lahaa inuusan lahayn, laakiin waa leef leexleexasho sidaa darteed maahan wax cabsi leh, kaliya waa qoyan.
Bruno! Xitaa ma aqaano sida aad ugu guuleysatay inaad jirkaaga geliso qolkaas, iskaba daa inaad leexato oo aad markale wajiga hore u wajahdo. Doqon nacas ah.
Goor dambe, markii aan guriga ka nimid beerta nasashada waxay ahayd waqtigii sariirta oo waxaan siiyay Spencer amar inuu ku soo galo qafiskiisa habeenkii. 'Qafis.' Silly Bruno wuxuu ula lugeeyay Spencer jikada wuxuuna kusii jeeday sanduuqa. Waan ku joojiyey isaga oo hab qabta orso intuu ag marayo. Ma aanan rabin inaan dhaho 'Maya' ama Spencer wuxuu u maleyn karaa inaan la hadlayo. Saaxiib Bruno, dhageyso. Hadda waxaad tahay wiil weyn umana baahnid in qafis lagu xidho habeenkii. Sanduuqa waxaa loogu talagalay wiilkaaga walaalka ah.
Xitaa ma hubo waxaani waa, laakiin waxay leedahay dareen lafo duug ah. Waxaan hubaa inaan rajeynayo inaysan ahayn nooc xaarka ah. Laakiin si kastaba xaalku maahan wax cunuggan ay ahayd inuu cuno.
Um, Spence. Xitaa ma hubo goortaad sidan sameysay. Dhageyso pup, ninka UPS ma keeno sanduuqyo kartoon ah adiga oo keliya inaad calaashado. Oh, oo miyaad aragtaa lafta sariirtaada? Ma u baahanahay wax intaa ka badan?
Doon kale oo dhimatay. Oh hoogay, Spencer. Waxaan u maleynayaa inaan taabtay rahyo badan oo dhintey tan iyo markii aan ku aqbalnay wixii aan noloshayda oo dhan ku qabtay. Taas isii. Isugeyn!
naclada buurta asalka ah ee iibka ah
Hmmm, hadda ardaygu wuxuu leeyahay fikrad sax ah. Laf buu ruugaa. Si kastaba ha noqotee taasi waa sharaabaadkeyga hoostiisa oo waan ogahay inaanan ku dhejin sariirtaas sariirta eygiisa. Waxay ku jirtay bootkayga.
Ha u oggolaan wejigaas aan waxba galabsan inuu ku khiyaaneeyo. U fiirso sharaabaadkaas hoostiisa? Wuxuu uun ka soo bixiyay sharaabaadkan kabahaas dhawr ilbiriqsi ka hor intaan sawirkan la qaadin. 'Haye!' dhulka ayuu ku soo dhacay sidii aad mooddo in fikirku aanu waligii maskaxdiisa ka soo bixin. Waa aniga Aad ayaan u qurux badanahay inaan sameeyo wax qalad ah.
Iyo markale. Wuxuu ku lahaa sharaabaadkaas afkiisa. Isla markii aan idhi 'Haye!' si dhakhso ah ayuu u jiifsaday oo wejigaas i siiyay. Aad ayey u xun tahay caddeynta ayaa ku saxan isaga hoostiisa. Waa inuu jeclaadaa urta cagaha. Cagaha, saxarada iyo raha dhintay. Wax walba dhinac wanaagsan ayaa ka jira - uguyaraanna kama waasto dabada sigaarka.
god Maraykan Pit bull cad
Maalin kasta waqtiga quudinta ka hor inta aysan Sara dhigin saxanka cuntada ee Spencer waxay u sheegtaa inuu fariisto oo ay weydiisato bawadiisa. Spence cagtiisa cagaha ayuu ku hayaa isagoo aan wax dhab ah taaban ama qofna Sara ayaa saxankiisa u dhigeysa inuu cuno. Waxay kaloo jeceshahay inay soo qaadato alaabtiisa, weydiiso cagtiisa oo markii uu kor u qaado ay isaga u dhiibto.
Sida muuqata tani waxay bartay Spencer taasi waa sida aad ula xiriirto inaad wax rabto. Labo ka mid ah waxyaabaha ay ku ciyaaraan Spencer ayaa ku jiray golaha wasiirada maxaa yeelay waa alaabada ay ku ciyaaraan ee u baahan kormeerida marka lagu ciyaarayo sababtoo ah afka weyn ee xoogan ee Bruno. Wuu kala daadin karaa daqiiqado gudahood haddii aan u oggolaado. Spencer wuxuu arkay alaabtii ay ku ciyaareen, wuxuu u soo dhaqaaqay dhanka golaha wasiirada, si degan ayuu u fadhiistay walina wuxuu eegay alaabada ay caruurtu ku ciyaaraan wuxuu kor u taagay cagihiisa hawada.
Goor dambe isla habeenkaa waxay ahayd waxyar uun ka dib xilligiisii ​​cashada. Wuxuu u dhaqaaqay meeshii uu wax ka cunayay, si deggan buu u fadhiistay oo cagihiisii ​​cirka hayey. Tani waxay i xasuusisay inaan u sheego Sara inay quudiso eeyaha. Si dagan ayuu u sugay markay diyaarinaysay cuntadiisa dabcan Sara waxay ku kaliftay inuu cagtiisa cirka kor u qaado ka hor inta uusan cunin.
Maaddaama uu hadda bartay in calaacasha hawada ay macnaheedu tahay inuu jeclaan lahaa taas, waxaan la hadlay Sara waxaanan u sheegay inay hubiso in khiyaanada 'baw' ay weli ku sii hayso oo keliya iyada oo aan lala xiriirin. Waan necbahay isaga inuu bilaabo xoqida dadka iyo waxyaabaha markuu wax doonayo. Sidoo kale waa inaan hubiyaa inuu deggan yahay oo u hoggaansamayo arrintaas oo uu khiyaano dheeri ah ku sameeyo shuruudahayga haddii uu helo waxa uu dalbanayo. Hal shay ayaa hubaal ah, inuu yahay hal arday oo caqli badan oo afar bilood uun jira.
Spencer ma helo fursad uu kor iyo hoos ugu raaco duulimaadyo buuxa marar badan. Dhammaadka usbuuca, si kastaba ha noqotee waxaan joognay guri leh talaabooyin uu u baahan yahay inuu kor iyo hoos u maro. Markii hore wuu eegay iyaga oo xitaa ma uusan dooneynin inuu isku dayo. Waan soo qaaday oo waan xambaaray ilaa ay laba tallaabo u hadhay oo waan dhigay. Spencer wuu fuulay iyaga oo faraxsan markii uu gaadhay meesha ugu sareysa. Waxaan ku dhammaannay inaan ka baxno albaabka dambe oo lahaa shan tallaabo jaranjarada. Spencer wuxuu hoos ugu dhacay kuwa aan wax dhibaato ah qabin. Marka xigta ee aan soo galno guriga Spencer wuxuu caqabad ku ahaa duulimaadka buuxa ee talaabooyinka mar kale hortiisa. Ma uusan dooneyn inuu fuulo. Waan soo qaaday oo waxaan dhigay afar tallaabo xagga sare. Wuu fuulay iyaga oo mar kale faraxsan markii uu dusha sare gaadhay. Isla maalintaas markii aan baxnay oo aan dib ugu soo laabannay Spencer waxaan eegnay duulimaadyadii oo buuxa oo aan aadnay. Intuu kor usii kacay ayuu keligiis fuulay! Markuu u soo dhowaado xagga sare, ayay sii badineysaa dabadiisa. Markuu dusha sare gaadhay dabada ayaa sifiican u socota.
Korinta Eyga: Spencer Pull Bull
Korinta Ey: Bruno Feeryahanka
Korinta Eyga: Mia the Bully American (Bully Pit)
Korinta Eyga: Sheekooyinka Bruno, Spencer iyo Mia
Macluumaadka Terrieriga Dibida Mareykanka
Sawirada Godka Dibida Mareykanka 1
Sawirka Godka Bull Terrier Sawirada 2
Sawirka Godka Bull Terrier Sawirada 3
Sawirada Godka Dibida Mareykanka 4
Sawirka Godka Dibida Mareykanka 5
Sawirada Godka Dibida Mareykanka 6
Sawirka Godka Bull Terrier Sawirada 7
Sawirada Godka Dibida Mareykanka 8
Sawirka Godka Bull Terrier Sawirada 9
Macluumaadka Xoogsheegashada Mareykanka
American Pit Bull Terrier iyo Dagaalyahan Mareykan ah
Liistada kaladuwan ee Baqda Ameerika iyo Dhiigga Mareykanka
Euthanasia Waajibka ah ee Teriga Mareykanka ee Godka Dibi
Korinta Eyga: Maalin nolosha ka mid ah oo leh Spencer Eyga Pit Bull
Eeyaha Bull Pit: Sawirada Guryaha La Uruurin Karo
pointer shorthaired Jarmal beerka adag
dachshund maltese mix puppy ee iib ah
fiiri eeyo yaryar oo iib ah
iskudhafka sheybaarka jaallaha ah ee lo'da Australia